I-LinkedIn iphehlelela uhlaziyo oluxhaswayo | Martech Zone
NgoLwesibini, Agasti 20, 2013 NgeCawa, nge-15 kaJanuwari 2017 Douglas Karr
I-LinkedIn ibikhona kuvavanywa uhlaziyo oluxhasiweyo neenkampani ezifana Hubspot, IAdobe, iLenovo, iXerox kunye neAmerican Express… ngoku bayivulela wonke umntu. Le iya kuba yindlela esebenzayo yeenkampani ze-B2B zokuchonga kunye nokujolisa kumathemba ngemizamo yabo yokuthengisa ngaphakathi kwi-LinkedIn.
iinzuzo Uhlaziyo oluxhasiweyo kwi-LinkedIn
Ukuphakamisa ulwazi kunye nokubumba ukuqonda Isisombululo sentengiso sokwandisa ngokukhawuleza ulwazi kunye nokwenza umbono wegama lakho, iimveliso kunye neenkonzo.
Khokelela kumgangatho weDrive -Ukwenza umgangatho ukhokele ngokwabelana ngolwazi olufunwa ziingcali. Bukela lo mxholo usasazeka ngokwabelana ngoontanga okwenzeka ngokwendalo kwi-LinkedIn.
Ukwakha ubudlelwane -Papasha umxholo wakho ngoHlaziyo oluxhasiweyo ukwenza ixabiso kunye nokuseka ukuthembana okubangela iingxoxo eziqhubekayo kunye nobudlelwane babathengi obunzulu.
Uhlaziyo oluxhasiweyo lweLinkedIn kugxila ekuqwalaseleni umva kwiphepha lenkampani le-LinkedIn ke qiniseka ukuba iseti yeNkampani yePhepha ukuba awukabikho.
tags: ukukhuthaza umxholoLinkedInUhlaziyo oluxhasiweyointengiso ehlawulweyouhlaziyo oluxhasweyo